Heesaaga caanka ah ee Itoobiya Hachalu Hundessa ayaa lagu dilay Addis Ababa - Tilmaan Media
in CAALAMKA, BULSHO, SIYAASAD
Heesaaga caanka ah ee Hachalu Hundessa ayaa maanta lagu dilay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Hachalu ayaa heesihiisa badankood waxa ay ku lug lahaayeen siyaasadda Itoobiya iyo xuquuqda dadka Oromada ay ku leeyihiin.
Mid ka mid ah heesihiisa oo lagu magacaabo “Maalan Jira” ayaa waxa aad u taabanaysay dhul ballaarsiga Amxaarada iyo sida ay ugu xad gudbayaan xuquuqda dadka kale ee Itoobiyaanka ah gaar ahaan Oromada.
Hachalu ayaa maalmihii danbe waxa uu booliiska u soo gudbiyay cabashooyin ku saabsan in loo soo diray hanjabaadyo in la dili doono ah. Dilkan Hachalu ayaa waxa uu dhaliyay bannaan baxyo cusub oo dib uga billowday Addis Ababa iyo agagaarka cisbitaalkii lagula cararay isaga.
Hachalu oo ahaa halyay kaalin weyn ku lahaa kacdoonkii dadka itoobiya oo ay oromadu hoggaaminayeen oo lagu soo doortay Raisul wasaaraha hadda talada haya Aby Ahmed ayaa dilkiisu waxa uu keeni karaa qalalaase kale oo ay Itoobiya dib u gasho.